Tag: dalab baahi | Martech Zone
Naqshadaha Tony Bianco si aad ah ayaa looga doonayay Australia muddo ka badan afartan sano, haddana sumadda ayaa ku xareysay joornaalada adduunka ugu saameynta badan iyo liisaska ugu labbiska wanaagsan moodooyinka Australia. Maanta, dad badan oo caan ah iyo moodello ku yaal Mareykanka iyo Yurub oo dhan ayaa lagu arki karaa iyagoo xiran noocyo kala duwan oo Tony Bianco ah iyo qalab. Si looga caawiyo dardar-gelinta ballaadhintooda caalamiga ah iyo dalabkooda xuduudaha, Tony Bianco wuxuu kala shaqeynayaa Pitney Bowes bixinta
Sabti, Agoosto 22, 2015 Sabti, Agoosto 22, 2015 Douglas Karr
Suuqleyda ayaa inta badan ku badala ereyada dalbashada jiilka (baahida gen) jiilka hogaaminta (hogaamiyaha gen), laakiin isku xeelado ma ahan. Shirkadaha leh kooxaha iibka ee heeganka ah waxay geyn karaan labada istiraatiijiyadood isku mar. Shirkaduhu badanaa waxay leeyihiin koox iib ah oo soo galeysa si ay uga jawaabaan dalabyada iibinta ee la soo dalbado iyo kooxaha iibka ee dibedda ka imanaya si ay ugu lug yeeshaan tilmaamahaas laga soo saaray waxqabadyada jiilka hoggaaminta. Haddii beddelka lagu adeegsan karo khadka tooska ah iyada oo aan lala macaamilin shirkadda, soo saarista dalabku waa muhiim